Vaovao - Izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny Separator Gravity
Izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny Separator Gravity
Fantatsika rehetra fa arakaraka ny lanjan'ny voa no mihamitombo ny taham-pitsimokany, ny heriny ary ny vokatra. Noho izany, mitana anjara toerana lehibe amin'ny fanasokajiana ny voa amin'ny lanja ao amin'ny indostrian'ny fanodinana voa. Ka firy no fantatrao momba ny gravity separator?
Inona no atao hoe Gravity Separator?
Ny gravity separator dia ampiasaina hanasarahana ny vokatra mitovy habe fa samy hafa ny gravité manokana. Izy ireo dia afaka manala amin'ny fomba mahomby ny ampahany nohanina, tsy matotra, areti-mifindra ary voa bobongolo amin'ny voa mba hahazoana antoka ny kalitao avo indrindra amin'ny vokatra farany. Ny fomba fanadiovana nentim-paharazana amin'ny fanadiovana voa sy ny amponga misy serrated dia hita fa tsy nahomby. Izy ireo dia azo ampiasaina hanasaraka sy hanara-penitra ny kafe, voanjo, katsaka, pitipoà, vary, varimbazaha, sesame ary voa hafa.
Inona no fitsipiky ny fiasan'ny Gravity Separator?
Ny fisarahana amin'ny gravity dia fomba indostrialy manasaraka singa roa, na fampiatoana, na fangaro granular maina izay manasaraka ireo singa amin'ny gravité.
Ny singa ao amin'ny fangaro dia manana lanjany manokana samihafa. Ary ny fomba gravitational rehetra dia mahazatra amin'ny heviny fa izy rehetra dia mampiasa hery misintona ho toy ny hery lehibe.
Karazana separator gravity iray no manainga ny akora amin'ny alalan'ny banga eo ambonin'ny ecran vibration mirona. Vokatr'izany dia mihantona eny amin'ny rivotra ny akora raha tavela eo amin'ny efijery ny loto mavesa-danja kokoa ary mivoaka avy ao amin'ny fivoahana vato. Ny vokatra dia mikoriana eo ambonin'ny latabatra mihovitrovitra izay idiran'ny rivotra misy tsindrin-tsakafo, ka mahatonga ny akora ho sosona mifanaraka amin'ny heriny manokana. Mifindra any amin'ny sosona ambony kokoa ny poti-javatra mavesa-danja kokoa, fa ny poti-javatra maivana kosa dia mizotra mankany amin'ny sosona ambany kokoa amin'ny latabatra.
Mba hahazoana ny fisarahan'ny gravité manokana mahomby, dia mila amboarina tsara ny famatsiana rivotra misy tsindry. Izany dia tratra amin'ny alàlan'ny fampiasana mpankafy azo amboarina tsirairay mba hifehezana ny fitsinjaran'ny rivotra amin'ny faritra samihafa amin'ny tokotanin'ny vibrating.
Ity karazana gravity separator ity dia manana tohatra mahitsizoro ka ny vokatra dia mandeha lavidavitra kokoa ka mahatonga ny fisarahana madio kokoa ny singa maivana sy mavesatra.
5XZ-10 Separator Gravity miaraka amin'ny karazana rivotra mitsoka
Ny indostrian'ny fampiharana ny Gravity Separator
Ny fisarahana amin'ny gravity dia ampiasaina amin'ny indostria isan-karazany, ny sehatra midadasika sy lehibe indrindra dia ny fambolena.
Ny gravity separators dia ampiasaina amin'ny fanesorana ny loto, ny fifangaroana, ny fahasimban'ny bibikely ary ny voa tsy matotra avy amin'ireto ohatra manaraka ireto: varimbazaha, vary orza, fanolanana misy menaka, peas, tsaramaso, voanio kakao, linseed. Izy ireo dia azo ampiasaina hanasaraka sy hanara-penitra ny voan-kafe, voanio kakao, voanjo, katsaka, voanjo, vary, varimbazaha, sesame ary voamaina sakafo hafa.
Endri-javatra amin'ny Gravity Separator
Afaka manasaraka mora foana ny fitaovana granular araka ny lanjan'ny vokatra.
Esory mora ny tokotanin-tsambo ho fanadiovana.
Fanitsiana mora ny fironan'ny deck amin'ny lalana longitudinal sy transverse.
Multi-fan system ho an'ny fanaraha-maso marina ny rivotra.
Fanaraha-maso tsara ny rivotra, ny tahan'ny sakafo ary ny hafainganam-pandehan'ny deck.
Tombontsoa amin'ny Separator Gravity
* Ahena ny asan’ny olombelona
* Fahombiazan'ny fisarahana ambony
* Mahay mifantina sy misaraka tsara
* Ny fisarahana ny loto dia manatsara ny kalitaon'ny vokatra
* Mampihena ny loza ateraky ny fahasalaman'ny mpanjifa
Ny SYNMEC dia manana karazana gravity separator avo lenta amidy, ary raha te hianatra bebe kokoa momba ny vokatray ianao dia mifandraisa aminay!
Fotoana fandefasana: Sep-01-2021